UKUMKANIKAZI WEKATWE CLIP: UALICIA KEYS 'UNIKWE ITHUBA - IZITSHIXO ZEALICIA
UKumkanikazi weKatwe Clip: UAlicia Keys ulapha ukuze akhuthaze ngengoma yakhe enikwe ithuba
UAlicia Keys usebenzisa ilizwi lakhe ukukhuthaza abanye entsha Ukumkanikazi waseKatwe ikliphu. Mfutshane emva kwesiqwengana sesigcawu esibonisa ukurekhoda kwakhe ingoma enikwe ithuba, ebandakanya kanye le movie imalunga nayo. Sonke sijonge ithuba. Kwaye ukuba unikwe ithuba, ngakumbi abasetyhini abasehlabathini, uyabona ukuba iba yintoni. Yonke into iyatshintsha, utsho kwividiyo.
Ibali ligxile kwibali eliyinyani elikhuthazayo elineminyaka eli-10 ubudala uPhiona Mutesi ohlala nosapho lwakhe kumatyotyombe aseKatwe e-Kampala, e-Uganda othe ikamva lakhe latshintsha xa edibana no-Robert Katende (David Oyelowo), owayesakuba ngumdlali webhola ekhatywayo wajika waba ngumthunywa wevangeli. Ufundisa abantwana balapha ukudlala ichess. UPhiona ngokukhawuleza uwuthatha umdlalo kwaye, emva kokuqhubela phambili kwiitumente zalapha ekhaya, uyaqonda ukuba unethuba lokuphakamisa usapho lwakhe kwintlupheko.
U-Lupita Nyong’o, odlala indawo kanina kaPhiona kule filimu, waye wachaza ngaphambili ukuba kutheni evakalelwa kukuba eli bali libalulekile. Sisifundo esifanele ukuba sisifunde kaninzi, ukuba apho uvela khona ayisiyiyo indawo okhoyo, uxelele UMary Sue kudliwanondlebe.
Ukumkanikazi waseKatwe iyafumaneka ngoku kwi-HD Digital kunye neBlu-ray.
Indawo Yokudlala 5
Dc Indalo Ephilayo
Intsingiselo yengoma intombazana etyumkileyo
Umdlalo weqonga we-TV
Harley quinn unodoli izinto zokudlala r us
yavelaphi into evuthayo
Kamisama ukwanga ngasemva kwabadlali belizwi
Izambatho ezithandwa kakhulu ze-halloween ngo-2010